Isiqulatho seSatifikethi sokuQala seSizwe sokuqala
Ngo-Oktobha 4, 1957, iSoviet Union yaqalisa i-satellite yokuqala ye-satellite, iSputnik 1 . Igama livela kwiLizwi lesiRashiya elithi "uhambahamba naye emhlabeni." Yayiyibhola encinci yensimbi eyayilinganisa iikhilo ezingama-83 (184 lbs.) Kwaye yafakwa kwi-rocky R7. I-satelesi encinci yathwala i-thermometer kunye nezixhobo ezimbini zomsakazo kwaye yayiyinxalenye yomsebenzi weSoviet Union ngexesha loMnyaka we-Geophysical Year.
Ngoxa iinjongo zayo kwakuyingqapheli yesayensi, ukuqaliswa kunye nokuthunyelwa kwi-orbit kubonakalise iinjongo zelizwe kwindawo.
I-Sputnik ijikeleze umhlaba rhoqo emva kwemizuzu eyi-96.2 kwaye idlulise ulwazi lwengqungquthela kwi-rediyo iintsuku ezingama-21. Kwiintsuku ezingama-57 emva kokuqaliswa kwayo, iSputnik yatshatyalaliswa ngelixa ivuselela umoya kodwa yabonisa ixesha elipheleleyo lokuhlola. I-mission yayiyikutshatyalaliswa okukhulu kwihlabathi, ngakumbi eMelika, kwaye yabangela ukuqala kwe-Space Age.
Ukubeka iSiteji soMdala weZithuba
Ukuqonda ukuba kutheni iSputnik 1 yayimangalisa kangaka, jonga emva kowe-1950. Ihlabathi lalunxwemeni kwinqanaba lokuhlola indawo. I-United States kunye ne-Soviet Union (ngoku eyi-Russia) yayibambisana ngokumalunga nempi kunye nemveli. Izazinzulu kumacala omabini zakha ii-rockets zokuthatha iirhafu kwiindawo kwaye zombini amazwe afuna ukuba ngowokuqala ukuhlola umda ophezulu. Kwakungomcimbi wexesha ngaphambi kokuba umntu athumele umthumo kumjikelezo.
Inzululwazi yendawo isena kwiNqanaba eliPhambili
Ngokwenzululwazi, unyaka we-1957 wasungulwa njengoMnyaka we-Geophysical Year (IGY), kwaye kwachithwa ixesha lokuhambelana nomjikelezo we-sunspot wama-11. Izazi zeenkwenkwezi zaziceba ukugcina ilanga kunye nefuthe layo kuMhlaba kulo lonke ixesha, ngokukodwa ekunxibelelaneni nasekufundiseni okutsha kwe-physics.
I-National Academy of Sciences yase-US yenze ikomiti yokujongana neeprojekthi ze-US IGY. Ezi ziquka ukuphanda kwezinto esizibiza ngoku "indawo yemozulu": ii-auroras, iiflammpi, imisebe ye-cosmic, i- geomagnetism, i-glaciology, i-gravity, i-ionosphere, imilinganiselo ye-longitude kunye ne-latitude, imeteorology, i-oceanography, i-seismology, umsebenzi welanga kunye nomoya ophezulu. Njengenxalenye yale nto, i-US yayinecebo lokulungiselela isicwangciso sokuqalisa i-satelite yokuqala yokufakelwa.
I-satellites yokufakelwa ayifuni ingcamango entsha. Ngo-Oktobha 1954, izazinzulu zifuna ukuba okokuqala kuqaliswe kwi-IGY ukupaka umhlaba. INdlu yeNdlu yavuma ukuba le nto ingaba yinto efanelekileyo, kwaye ivakalise izicwangciso zokuqalisa i-satellite-orbiting satellite ukuze ithathe umlinganiselo womoya ophezulu kunye nemiphumo yomoya. Iziphathamandla zacebisa iziphakamiso ezivela kwiinkampani ezahlukeneyo zophando zikaRhulumente ukuba zenze uphuhliso lwalo msebenzi. NgoSeptemba 1955, isiphakamiso seVathoard ye-Naval Research Laboratory sanyulwa. Amaqela aqala ukuzakhela nokuvavanya imicibisholo, eneempumelelo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba iUnited States ikwazi ukuqalisa ii-rockets zayo zokuqala endaweni, iSoviet Union ibetha wonke umntu kwi-punch.
Isibonakaliso "sokubamba" esivela kwiSputnik asikhumbuli kuphela umntu ophakamileyo waseRussia, kodwa kwakhona i-opinion yoluntu ehlangeneyo e-US Ukuhlaselwa kwezopolitiko kumaSoviet "ukubetha" amaMerika ukufaka isikhala kukhokelela kwiziphumo ezithandekayo nezizelele. Ngokukhawuleza waqala ukubonelela ngemali enye yeprojekthi ye-satellite yesatellite.
Ngexesha elifanayo, uWernher von Braun kunye neqela lakhe laseArms Redstone Arsenal baqalisa ukusebenza kwiprojekthi ye- Explorer , eyaqaliswa ukujikeleza ngoJanuwari 31, 1958. Ngokukhawuleza, inyanga yaziswa njengento ephambili ekujoliswe kuyo uchungechunge lwemisebenzi.
Uqaliso lweSputnik lukhokelela ngqo ekudalweni kwe-National Aeronautics kunye ne-Administration Administration (NASA). NgoJulayi 1958, iNkcazo yadlulisela uMthetho weSizwe we-Aeronautics kunye noMthetho wesikhala (obizwa ngokuba yi "Space Act"). Loo nto wenza i-NASA ngo-Oktobha 1, 1958, ukudibanisa iKomiti yeCandelo eliPhakamisayo le-Aeronautics (NACA) kunye namanye arhente karhulumente ukwenza i-arhente entsha ejolise ekubekeni i-US ngokukodwa kwindawo yezoshishino.
Iimodyuli zeSputnik ezikhunjulwa kule mishini ekhuselekileyo zixhomekeke kwiZakhiwo zeZizwe eziManyeneyo kwiSixeko saseNew York, iMyuziyam ye-Air kunye ne-Space eWashington, DC, iMyuziyam yoMhlaba eLiverpool, eNgilani, kwi-Kansas Cosmosphere kunye neZiko leZithuba e-Hutchinson, kwisiCwangciso seNzululwazi saseCalifornia. I-LA, i-Embassy yaseRashiya eMadrid, eSpain, kunye nezinye iimyuziyam ezininzi zase-US Ziyakhumbuza izikhumbuzo zeentsuku zokuqala ze-Space Age.
Hlangana noNeil Armstrong
I-Star yeVulcan yeTyelelo
Ukutya okuGcobileyo kwegazi
Kukho i-Ground yeGufi eNgenayo ye-Outta Intergalactic Space
IiHolesi ezingama-58: iBhodi yaseYiputa yangaphambili yeeHound and Jackals